Nke a abụghị Usoro Mgbasa Ozi Influencer, Kwụsị Ya! | Martech Zone
Nke a abụghị Usoro Mgbasa Ozi Influencer, Kwụsị Ya!
Saturday, July 22, 2017 Mọnde, Jenụwarị 18, 2021 Douglas Karr
Enwere ọtụtụ mkpọtụ na soshal midia na ọ na-esiri ike mgbe ụfọdụ ịnọgide. Enwere m mmasị n'eziokwu na enwere m nnukwu ihe na-esote n'ịntanetị ma ana m anwa itinye aka ma zaghachi onye ọ bụla na-arịọ arịrịọ. Mgbe ọ bụ ụlọ ọrụ m na-ekwubu okwu na mbụ, m na-ewepụta oge ma zaghachi ya.
Nke ahụ kwuru, enwere usoro aghụghọ na-amalite ịpụta na ntanetị nke na-eri oge m na ozi ozugbo na ozi ezubere iche. Ndị ụlọ ọrụ na-ebipụta arịrịọ ahaziri iche nye m dịka nke dị n'okpuru iji mee ka m zaghachi ma ọ bụ kesara ndị na-ege m ntị. Ekwenyeghi m ma ha na-akpaghị aka ma ọ bụ na-edozi aka, ma ha na-ewe iwe - m na-eme ka ha mara ya.
Lee otu ihe atụ n'okpuru. Enwekwara m ọtụtụ ndị a sitere na ụlọ ọrụ dị iche iche site na ozi ziri ezi na email. Ewepụwo m aha gị n'ụlọnga ebe ọ bụ na ha na-eji ọdịnaya magburu onwe ya metụtara ndị na-ege anyị ntị. Nke a dị n'okpuru; agbanyeghị, abụghị otu n’ime ozi ndị ahụ. Anaghị m akparịta banyere Snapchat, arịọghị ndụmọdụ onye ọ bụla gbasara Snapchat, achọghị m ịma banyere nke Snapchat ọhụrụ atụmatụ.
Kedu ihe kpatara nke a ji bụrụ atụmatụ egwu dị egwu?
Nke a bụ onye na-adọrọ mmasị ma na-elebara anya nke na-adọpụ uche m na ọrụ m ọzọ. Ọnọdụ email bụ otu ihe, m ga-enyocha ha n'oge nke m ma zaghachi ma ọ bụ hichapụ dị ka ọ dị mkpa. Nke a bụ ihe atụ (ezi uche):
Ihe atụ A: Anọ m ọdụ na tebụl m na-arụ ọrụ, nnukwu olulu email na-abata. Yana pitch bụ ozi ndị ọzọ sitere na ndị ahịa na atụmanya. Ọ dịghị onye zitere m ka m zaghachi ozugbo, n'agbanyeghị. Mgbe m nwere ohere ịlele email, m na-enyocha ha ma zaghachi ya.
Ihe atụ B: Anọ m ọdụ na tebụl m na-arụ ọrụ, ị na-anapụ m okwu, jụọ m ma m nwere mmasị n’otu isiokwu m na-agwabeghị gị. Ugbu a, ọtụtụ ndị na-egbochi m ihe ọ bụla nwere ihe dị mkpa ha ga-ajụ na-achọpụta na oge m bara uru na naanị akụ m nwere. Ha agaghi abanye na ya.
Ofdị ebumnuche a na-ewepụ uru nke oge m ma na-ewepụ m na ndị chọrọ ịgwa m okwu ma ọ bụ chọọ enyemaka m.
Y’oburu n’echiche na nka bu uzo ahia ichota ahia - gbasaputa ma na emebi m ubochi gi nile. Biko kwanyerenu oge m. Ọ bụrụ na ị ga-abịakwute m n'onwe m na mgbasa ozi ọha na eze, mee ya mgbe m meghere ọnụ ụzọ nke mkparịta ụka ahụ. Ma ọ bụghị ya, naanị bipụta ozi gị dịka ọ dị - na-enweghị mkpado onwe m.
Iji soro ndị na-eme ihe ike rụọ ọrụ, ịkwesịrị iso gị nwee mmekọrịta. Ekwesịrị m ịtụkwasị obi na ị na-ele anya maka abamuru m ma ị gaghị etinye ndị na-eso ụzọ m n'ihe egwu. Nke a bụ ọbụghị na atụmatụ ịre ahịa mmetụta.
Tags: ahịa ahịaelekọta mmadụ mediatweetozi twitter
LegalZoom na-emejupụta ọgụgụ isi site na iji Veritone One
Atụmatụ 7 iji bawanye njikọ na Instagram